EPL: Kooxda Chelsea oo dheereysatay hoggaanka horyaalka, kaddib guul wayn oo ay ka gaartay Bournemouth, xilli labo jeer uu shabaqa soo taabtay Pedro… + SAWIRRO – Gool FM
EPL: Kooxda Chelsea oo dheereysatay hoggaanka horyaalka, kaddib guul wayn oo ay ka gaartay Bournemouth, xilli labo jeer uu shabaqa soo taabtay Pedro… + SAWIRRO
Haaruun December 26, 2016
(London) 26 Dis 2016 – Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa sii dheereysatay hoggaanka horyaalka Ingiriiska, kaddib markii ay 3-0 uga adkaatay naadiga Bournemouth oo marti u ahayd, xilli labo jeer uu shabaqa soo taabtay kulankan Pedro Rodriguez.
Chelsea ayaa goolka koowaad la timid qeybtii hore, waxaana kubbad uu ka soo tuuray bannaanka xerada ganaaxa oo waliba uu ka dul qaaday goolhayaha kooxda Bournemouth u dhaliyey 24’daqiiqo Pedro Rodriguez, kaddib baas uu ka helay saaxiibkiis Cesc Fabregas, Blues oo ciyaarta ku hoggaamisay 1-0 ayaana la kala maray qeybta hore ee dheesha.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaata kooxda Chelsea ayaa la timid goolka labaad waxaana uu ahaa gool ku laad uu u dhaliyey 49’daqiiqo Eden Hazard, waxaana uu gool u rogay rigoore isla isaga lagu galay oo uu qaladkeeda lahaa Simon Francis, kulanka ayaana sidaas ku noqday 2-0 ay hoggaanka ciyaarta ku qabtay Chelsea.
Pedro Rodriguez ayaa u dhaliyey goolkiisa labaad ee kulankan kooxdiisa Chelsea dhammaadkii ciyaarta, waxaana Blues ay sidaasi uga badisay Bournemouth 3-0.
Kooxda Chelsea ayaa sidaasi ku gaartay guusheedii 12-aad oo xiriir ah Premier League, waxaana ay sii dheereysatay hoggaanka horyaalka Ingiriiska, waxaana ay haysataa 46-dhibcood 18 kulan oo ay ciyaartay.
Lucas Vazquez oo kula taliyay James Rodriguez inuu iska joogo Real Madrid
EPL: Man United oo guul wayn ka gaartay kooxda Sunderland ee uu watay tababarahoodii hore, iyadoo kulankan uu bandhig cajiib ah sameeyey Ibrahimovic… + SAWIRRO